တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဥပုသ် ဆိုတာ …
သင်္ကြန်အတက်နေ့က ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်ရဲ့ ကွန်မန့်မှာ ryan က ဥပုသ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးထားတာလေးကို ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြန်ဖြေချင်တဲ့အတွက် ကွန်မန့် အနေနဲ့ မရေးတော့ဘဲ ပို့စ်အသစ် အနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်။
ဥပုသ်ဆိုတာ ပါဠိလို ဥပေါသထပုဒ်က ဖြစ်လာတဲ့စကားဖြစ်ပြီး မြန်မာလိုတော့ ကျင့်သုံးခြင်း လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ လူမှန်ရင် ငါးပါးသီလကို နေ့စဉ်မပြတ် စောင့်ထိန်းကြရမယ်။ ကျင့်ရိုးကျင့်စဉ် သီလဖြစ်တဲ့ ရိုးရိုး ငါးပါးသီလထက် ထူးခြားပြီး အရိယာ သံဃာ၊ ပုထုဇဉ် ရဟန်း သာမဏေတွေ ရာသက်ပန် ဆောက်တည် ကျင့်ကြံကြတဲ့ သီလတွေထဲက မေထုန်မှု မပြု၊ ညစာမစား၊ ပွဲလမ်း မကြည့်၊ ပန်းနံ့သာမခြယ်၊ မြင့်ရာ မြတ်ရာမှာ မနေခြင်း ဆိုတဲ့ လေးပါးကို အရိယာ သံဃာတော်များလို အမြဲမဟုတ်တောင်မှ ဥပုသ်နေ့လို့ အများသတ်မှတ် စောင့်သုံးကြတဲ့ နေ့ တနေ့နဲ့ တညမှာတော့ ရှောင်ကြဉ်မယ်၊ ဒီရှစ်ပါးသီလနဲ့ ပြည့်စုံအောင် ကျင့်ကြံမယ် ဆိုပြီး အကျင့်သီလနဲ့ ပြည့်စုံပြီးနေတာကို ဥပုသ်စောင့်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားဟာ ၀ိသာခါ ကျောင်းအမကြီးကို ဥပုသ် (၃) မျိုးအကြောင်း ဟောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ (အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်၊ တိကနိပါတ်၊ မဟာဝဂ်၊ ဥပေါသထသုတ်)
ဥပုသ် (၃) မျိုး
နွားကျောင်းသားတွေဟာ ဒီနေ့တော့ နွားတွေကို ဒီတောမှာ ကျောင်းပြီး ဒီချောင်းမှာ ရေတိုက်တယ်၊ နက်ဖြန်ကျရင်တော့ ဘယ်တောမှာ ကျောင်းပြီး ဘယ်ချောင်းမှာ ရေတိုက်ကြမယ်လို့ စီစဉ်လေ့ရှိသလို ဥပုသ်သည်တွေဟာလည်း ဒီနေ့တော့ ဘာဟင်း ဘာမုန့်တွေစားပြီး နက်ဖြန် သို့မဟုတ် နောက်ဥပုသ်မှာ ဘာဟင်းချက်စားမယ်လို့ အစားအသောက် ကောင်းတွေ စားဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ ဥပုသ်မျိုးကို နွားကျောင်းသားဥပုသ် လို့ ခေါ်ပါတယ်။
(၂) နိဂဏ္ဍဥပုသ် (တက္ကတွန်းဥပုသ်)
ဒိဋ္ဌိ တက္ကတွန်းတွေ စောင့်သုံးတဲ့ ဥပုသ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နှစ်မိုင် အတွင်းမှာရှိတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကိုတော့ မသတ်ကောင်း၊ ဒီမိုင် သတ်မှတ်ချက် ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကိုတော့ သတ်ကောင်းတယ် လို့ ဒုစရိုက် ပြုလို့ရအောင် ကြံဖန်စောင့်သုံးတဲ့ သီလမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) အရိယဥပုသ် (စင်ကြယ်သောဥပုသ်)
ဘုရားဂုဏ်တော် စသည်ကို အဖန်ဖန် နှလုံးသွင်းပြီး မိမိစိတ်မှာ ကိလေသာ အညစ်အကြေး စင်ကြယ်အောင် စောင့်သုံးတဲ့ ဥပုသ်မျိုးဖြစ်တယ်။
က- အရဟံ အစရှိတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ နေတဲ့ ဗြဟ္မာ့ဥပုသ်၊
ခ- သွာက္ခာတ အစရှိတဲ့ တရားတော်ရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ နေတဲ့ ဓမ္မဥပုသ်၊
ဂ- သုပ္ပဋိပန္န အစရှိတဲ့ သံဃာတော်ရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ နေတဲ့ သံဃဥပုသ်၊
ဃ- သီလရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အဖန်ဖန် နှလုံးသွင်း နေတဲ့ သီလဥပုသ်၊
င- သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေ ရှိကြတဲ့ နတ်ဗြဟ္မာတွေကို စံထားကာ စောင့်သုံးတဲ့ ဒေ၀တာဥပုသ်၊
စ-ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ သူ့အသက်ကို မသတ်ခြင်း စတဲ့ အင်္ဂါ ရှစ်ပါးနဲ့ ပြည့်စုံကြသည်ဟု ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အတုယူကာ ဥပုသ်အင်္ဂါ ၈-ပါးလုံးကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ စောင့်သုံးတဲ့ သီလကို အဋ္ဌင်္ဂုပေါသထ ဥပုသ်၊
စသဖြင့် အရိယဥပုသ် ၆-မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
* အဟံဘန္တေ တိသရဏေ နသဟ အဋ္ဌင်္ဂ သမန္နာဂတံ ဥပေါသထသီလံ ဓမ္မံယာစာမိ အနုဂ္ဂဟံ ကတွာ သီလံ ဒေထ မေဘန္တေ။
(အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် သရဏဂုံ သုံးပါးနှင့်တကွ အင်္ဂါ ၈-ပါးရှိသော ဥပုသ်သီလကို တောင်းခံပါသည်၊ တပည့်တော်ကို ချီးမြှောက်သော အားဖြင့် သီလ (ဆောက်တည်ခွင့်)ပေးတော်မူပါ ဘုရား။)
(၁) ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
သူတပါး၏ အသက်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်း ညှဉ်းဆဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
(၂) အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
သူတပါး၏ ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း လုယက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
(၃) အဗြဟ္မစရိယာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
မမြတ်သော မေထုန်အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
(၄) မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
မဟုတ်မမှန် လိမ်ညာ လှည့်ဖျား မမှန်စကား ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
(၅) သုရာမေရယ မဇ္ဖပမာဒဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ယစ်မူး မေ့လျာ့ကြောင်းဖြစ်သော ဘိန်းဘင်း ကစော် လှော်စာ အရက် သောက်စား ရှူရှိုက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
(၆) ၀ိကာလ ဘောဇနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
နေမွန်းလွဲသောအခါ ညစာ စားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
(၇) နစ္စ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသုက ဒဿန မာလာ ဂန္ဓ ၀ိလေပန ဓာရဏ မဏ္ဍန ၀ိဘူသနဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ကိုယ်တိုင် ကခြင်း, သူတပါးကို ကစေခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်သီဆိုခြင်း, သူတပါးကို သီဆိုစေခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် တီးမှုတ်ခြင်း, သူတပါးကို တီးမှုတ်စေခြင်း၊ က-ခြင်း, သီဆိုခြင်း, တီးမှုတ်ခြင်းတို့ကို ကြည့်ရှု နားထောင်ခြင်း၊ ပန်းပန်ခြင်း၊ နံ့သာ လိမ်းကျံခြင်း တို့မှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
(၈) ဥစ္စာသယန မဟာသယနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
မြင့်သော မြတ်သော အိပ်ရာ နေရာတို့၌ နေထိုင် အိပ်စက်ခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
အမှတ်စဉ် (၃)ဖြစ်တဲ့ အဗြဟ္မစရိယာ သိက္ခာပုဒ်ကို မကျိုးမပေါက်အောင် စောင့်ထိန်းစေခြင်းငှာ (၆-၇-၈) သိက္ခာပုဒ်တို့ကို စောင့်ထိန်းရတယ် လို့ မှတ်သားသိခဲ့ရပါတယ်။
နေလွဲညစာ စားသုံးခြင်း၊ အတီးအမှုတ် အကအခုန်တွေကြည့်ရှုခြင်း၊ နံ့သာ လိမ်းခြင်း ပန်းပန်ခြင်း၊ ကောင်းမွန် ခမ်းနားတဲ့ အိပ်ရာ နေရာတို့မှာ နေထိုင် အိပ်စက်ခြင်းအားဖြင့် ကာမဂုဏ် အာရုံတွေကို တိုးပွားစေတဲ့အတွက် သီလ ပျက်ပြားစေနိုင်လို့ပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ညစာမစားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခုပြောချင်ပါတယ်။
ညစာမစားတာဟာ အတ္တကိလမထာ (မိမိကိုယ်ကို ညှဉ်းဆဲခြင်း) ဆိုပြီး အစွန်းရောက်တယ်လို့ တချို့က ဆိုကြတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ သီလစောင့်ထိန်းသူ အနေနဲ့ ညစာမစားခြင်းဖြင့် ညစာအတွက် စီမံချက်ပြုတ်ရတဲ့ အလုပ်ပိုတခု သက်သာတယ်၊ အချိန်ကုန် သက်သာတယ်၊ ညစာစားလို့ ဗိုက်လေးပြီး အိပ်ငိုက်တာမျိုး မဖြစ်ဘူး၊ နေရထိုင်ရ ပေါ့ပါးမှု ရှိပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တရက်တလေ ဥပုသ်စောင့်တဲ့ အခါမျိုးမှာ ဗိုက်ဆာလည်း အောင့်အည်း သည်းခံ သင့်ပါတယ်။ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး အချိုရည်လေး စတုမဓူလေး စားလို့ရပါတယ်။ ဒါဟာ မိမိကိုယ်ကို ညှဉ်းဆဲခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အကျင့်ဖြစ်သွားရင် ပေါ့ပါးပြီး နေရထိုင်ရ ပိုကောင်းလာတတ်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားက ဂီလာန ရဟန်းတော်တွေကို ညစာစားဖို့ ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့တာပဲ လို့ တယောက်က ဆင်ခြေတက်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ … တသက်လုံး တရားအားထုတ်လာတဲ့ ဂီလာန ရဟန်းတော်အတွက် မြတ်စွာဘုရားက ညစာ ခွင့်ပြုတာနဲ့ပဲ ခဏတဖြုတ် ဥပုသ်ယူတဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက အတုယူပြီး လိုက်စားကြမှာလား။
တခါတလေမှ စောင့်တဲ့ သီလမို့ မကျိုးမပေါက် မပြောက်မကြား စောင့်ထိန်းနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ မဟုတ်ပါလား။
အဲဒီ ၈-ပါးသီလမှာ မေတ္တာသဟ ဂတေန … စတဲ့ သိက္ခာပုဒ်ကိုထည့်ရင် ၉-ပါးသီလ ဆောက်တည်တယ် လို့သာ အလွယ်ဆိုကြပေမဲ့ မေတ္တာခြံရံသော ရှစ်ပါးသီလ ဆိုမှ မှန်ပါတယ်။ သီလ ဆိုတာ စောင့်ထိန်း အပ်ခြင်း၊ ဘာဝနာ ဆိုတာ ပွားများအပ်ခြင်း မို့ ရှစ်ပါး သီလ စောင့်ထိန်းပြီး မေတ္တာပွားများ နေခြင်းဟာ အင်္ဂါ ၉-ပါးရှိသော န၀င်္ဂ ဥပုသ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၉-ပါး သီလ မဟုတ်ဘဲ ၉-ပါး ဥပုသ်လို့ ခေါ်မှ ပိုပြီး မှန်ကန်မယ်လို့ တိပိဋကဓရ ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တက ဆုံးဖြတ်ပေးထား ပါသတဲ့။
ဒါလောက်ဆိုရင်ဖြင့် ဥပုသ် သီလနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံ အချက်လေးတွေ သိလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ကြုံတုန်း တခုလောက် ပြောချင်ပါတယ်။
ခုလို မေးမြန်းတာကို ကျမ အလွန် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေးမြန်းတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေချာ ဂဏ ဖြေချင်တာမို့ စာအုပ်တွေ ပြန်ဖတ်ဖြစ် လေ့လာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျမအတွက် အင်မတန်မှ အကျိုးရှိပါတယ်။ နောက်တခုက …. ကျမဟာ မိရိုးဖလာလွန် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တယောက် အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို လေ့လာပြီး ကြိုးစား ကျင့်ကြံ လိုက်နာသူ တဦးမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ ခုလို ပြန်ဖြေပေးနိုင်တာဟာ ကျမ သိလွန်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမ အနားမှာ ကျမ သိချင်သမျှ မေးခွင့်ရတဲ့ ကျမ ဖခင်ကြီး ရှိနေတဲ့အပြင် ကျမမှာ ကိုးကားစရာ စာအုပ်များစွာ ရှိနေတဲ့ အတွက် ခုလို ဖြေပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ အဖြေများ တစုံတရာ မှားယွင်းပါက အသိဉာဏ် မကြွယ်ဝသူ ကျမမှာသာ အပြစ်ရှိပါတယ်။ ကျမ ရေးသားချက်များဟာ သိလိုသူများနဲ့ မသိသေးသူများကိုသာ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ကိုးကား ။ ။
(၁) အသျှင်တေဇောသာရ ၏ ဥပုသ်သည် ကြေးမုံ
(၂) ဆရာသောင်းလွင် (သကျသီဟ ၀ဋံသကာ) ၏ မိရိုးဖလာလွန် ဗုဒ္ဓဘာသာ
Posted by မေဓာဝီ at 6:46 PM
Great, i think you are good in buddhism.
4/21/2007 7:47 PM
great post. thank for explaining in very detail.
thank u ma maydar wii...i like to ask about No,7 theela... is it ok to watch TV or not? and No,8 theela, how high do u mean ?i'm confused about that2issues... some monestry watch TV series, and one feet height is high enough? thanks again...be peace in mind, Ma MDW...
4/21/2007 9:11 PM
ဥပုသ်သည်တွေ ရုပ်မြင်သံကြား ကြည့်လို့ ရမရဆိုတာ ကိုယ်ကြည့်တဲ့ အစီအစဉ်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်၊ သီချင်း၊ အက အဲဒီလိုမျိုး အစီအစဉ်တွေဆိုရင်ဖြင့် မကြည့်သင့်ပါဘူး။ တရားဓမ္မနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစီအစဉ်မျိုး ကြည့်တာကတော့ အပြစ်မရှိပါဘူးရှင်။
နံပါတ် ၈-သီလ ဖြစ်တဲ့ မြင့်သောမြတ်သော အိပ်ရာ နေရာဆိုတာက တတောင့်ထွာထက် အမြင့်လို့ ဆိုထား ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တထောင့်ထွာထက် မြင့်တဲ့ ခုတင်၊ မွေ့ရာ တွေပေါ်မှာ အိပ်ခြင်း နေခြင်း မပြုရပါဘူး။
တချို့ ရဟန်းတွေ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေ ကြည့်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစား အာပတ်သင့်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစား ချိုးဖောက်မိတဲ့ အာပတ်တွေကို ပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြတ်စွာဘုရား ပညတ်ထားတဲ့ ၀ိနည်း စည်းကမ်းတွေကို အသေးအဖွဲကအစ မချိုးဖောက်မိရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
4/22/2007 9:12 AM
အခုနောက်ပိုင်းမှာ တချို့သော ရဟန်းတော်တွေဟာ မမေဓာဝီ ပြောခဲ့သလို ဆင်ခြေမျိုးနဲ့ ညစာ စားတတ်တာ အပြင်၊ (ခေတ်ကြောင့်ပဲလားတော့ မသိ) တချို့ သံဃာတွေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လက်ဖက်ရည် သောက်သူသောက်၊ အအေးသောက်သူသောက်၊ တချို့ဆို ဆိုင်က ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းကို လိုက်ညည်းတာကိုပါ တွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ခေတ်ကိုက ဒီလိုဖြစ်နေပါလားလို့ ပြောတော့မလားတော့ မဆိုနိုင်။
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ရတော့ ဥပုသ်ဆိုတာရဲ့ အကြောင်းကို စေ့စေ့ငင သိသွားရတယ်။ မေးတော့ မမေးတော့ပါဘူးဗျာ။ ကျနော်က တခုခုမေးလိုက်ရင် အမအဖေမှာ ဦးနှောက်စားနေရမယ်။ :P လူကြီးကို ဒုက္ခမပေးချင်လို့။
4/22/2007 9:51 PM
ကို ကလိုစေးထူး မေးမဲ့ မေးခွန်းကို ရော .. မ မေဓာဝီ ဘလော့ က ဖြေမယ့် အဖြေကိုရော အလွန်တရာစိတ်ဝင်စားပါတယ်..
ကျေးဇူးပြုပြီးမေးစေလိုပါတယ်.. အသိပညာဝေမျှနိုင်မယ့် သဘောပေါ့
4/23/2007 5:00 AM
ဒီဘက်ခေတ် သံဃာတော်တွေအကြောင်းကို ကျွန်တော်ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးဖူးပါသေးတယ်...သံဃာက လူကိုကယ်တင်သလို လူက သံဃာကို ထိန်းကျောင်းပေးရမယ့် ကာလရောက်နေပြီလို့ ထင်မိတာကြောင့်ပါ...သာသနာသက္ကရာဇ်ကလည်း ၂၆၀၀ကျော်ခဲ့ပြီ မဟုတ်ပါလား အစ်မရယ်....
2/27/2011 10:50 AM
ကောင်းတယ် အမေးအဖြေလေးကိုလည်း သဘောကျတယ်။
4/15/2013 12:49 PM